C/waaxid oo Dafiray Beel Degta Puntland Sidii isaga Qabiilkiisa loo Dafiray
Waxaan ku bilaabayaa magaca eebe,naxariis iyo nabad gelyo suubanahii Muxamed bay usugnaatay.
Anoo tixraacaya qoraalkii Cabdiwaxid Khaliif ee cinwaankiisu ahaa* Isbarbardhigidda Booqashada C/lahi yusuf iyo Muuse Yalaxaw*ayaa waxaa filinwaa naga noqotay sida ku talo galka ah ee Cabdiwaaxid uu u dafiray Beel degta Puntland,ahna beel aad iyo aad ixtiram gooniya u leh isla markaana degta dhammaan gobalada uu ka koobanyahay Puntland laga bilaabo Sanaag beri ilaa waqooyi Mudug waana Jufooyin ka mid ah Beelweynta Dir,taasoo aan u qaadanay c/waaxid inay aargoosi ka ahayd markuu ku dari waayay liis uu taxay oo uu kaga hadlayay beelaha dega puntland isagoo xusay kuwa ay aad uga badan yihiin.
Waxaana usifeenay aargoosigaas labo arrimood:
!-Cabdiwaaxid oo beeshaas ka urinaya C/laahi yuusuf maadaama ay Abti u yihiin,oo colaada uu u qabo kornaylka ay gaarsiisay inuu xitaa reer abtigii naco.
2-beesha iyo beesha reer abtiga u ah C/waaxid oo ayaamahan dagaal qaraari ka dhexeeyo,iskuna hardinaya gobalka galgaduud.oo arintu waa faqi tolkii kama jano tago oo reer abtigii reer caabudwaaq ayuu ina khaliif lasaftay.
waxaan marna qiilo loo helayn aqoon bay ka ahayd waayo C/waxid waa nin aad aqoontiisu aad usareyso oo xitaa heer jaamacadeed ayuu garsiisantahay,degaankana aad iyo aad buu ukala yaqaana balse waxaasoo dhan caadifad reer abtigiis iyo nacayb ina yuusuf yay baa ku kalifay inuu dafiro nativkii puntland ee beeshii karaamda iyo ixtiraamka lahayd ee Dir.
waxaanu leenahay C/waaxid dafiradaadu calooshada uunbaad na tustay ee waxba ka tarimayso dafiraadda aad galisay internetka beelweynta dir.
Waa Siciid Xasan Dhego cade